Oovimba abagciniweyo boDidi: Amanqaku eMigangatho
Iimpawu ezi-6 kunye neeMpawu zoMhlaza weBongo
21 / 08 / 2016 /0 Amazwana/i Amanqaku mfanelo/av ubuhlungu
Iimpawu kunye neempawu zoMhlaza weBongo
Nazi iimpawu ezi-6 kunye neempawu zomhlaza wobuchopho ekuvumela ukuba uqaphele imeko kwasekuqaleni kwaye ufumane unyango olufanelekileyo. Ukuxilongwa kwangoko kubaluleke kakhulu ukuthintela ukukhula komhlaza. Akukho nanye kwezi mpawu ngokwendlela yazo yokuba unomdlavuza wobuchopho, kodwa ukuba ufumana ezinye zeempawu, sicebisa ukuba unxibelelane negumbi likaxakeka okanye ugqirha wakho ukuze ufumane udliwanondlebe. Unalo igalelo? Zive ukhululekile ukusebenzisa icandelo lokuphawula okanye unxibelelane nathi ku Facebook okanye YouTube.
Iimpawu zomhlaza wobuchopho zinokubalula kwaye zibanzi ngokubanzi. Nceda uqaphele ukuba olu luhlu alunazo zonke iimpawu ezinokubakho kwaye lunokubangelwa zezinye izinto ngaphandle kwesisu okanye umhlaza wobuchopho.
1. Intloko ebuhlungu
Uphawu oluqhelekileyo lwethumba ebuchotsheni lunokubandakanya iintloko ezibi kakhulu ezinamava njenge "ntloko eqhelekileyo". Intloko ihlala iba mandundu ngomsebenzi kunye nentsasa. Gcina ujonge nokuba iintloko zenzeka rhoqo kwaye ziye zisiba mandundu.
Unobangela oqhelekileyo: Unobangela oqhelekileyo wentloko kukungasebenzi kakuhle kwezihlunu kunye namalungu-ahlala ebangelwa kukuphindaphinda umsebenzi, intshukumo encinci kubomi bemihla ngemihla kunye noxinzelelo oluninzi. Funa uviwo yi-chiropractor okanye i-physiotherapist ukuba unengxaki yentloko rhoqo.
2. Ukuhlutha iimoto / iintshukumo ezingalawulekiyo
Ukujija ngequbuliso kunye nokuhamba kwezihlunu. Ikwabizwa ngokuba kukuxhuzula. Abantu banokufumana iindlela ezahlukeneyo zokubanjiswa.
3. Ukucaphuka / ukugabha
Abantu abachaphazelekayo banokufumana isicaphucaphu kunye nokugabha ngaphandle kwengcaciso elungileyo yoku - njengokugula. Njengoko imeko iya isiba mandundu, inokwenzeka kaninzi.
4. Iingxaki zokulinganisela kunye nesiyezi
Uziva ungazinzanga kwaye ngokungathi yonke into ijikeleza kuwe? Abantu abanomhlaza wobuchopho bahlala beziva benesiyezi, iintloko ezikhanyayo kwaye ngokungathi abanakho ukuzilungelelanisa.
Izizathu eziqhelekileyo: Ukonyuka kobudala kungakhokelela ekulinganiseni okuhlwempuzekileyo kunye namazinga aphezulu okuba nesiyezi. Sincoma ke ngoko ukuba uzilolonge rhoqo.
5. Utshintsho oluvakalayo
Abantu abachaphazelekayo baya kuba nakho ukutshintsha utshintsho kwimbono, ukuva, ukuziva kunye nevumba.
Ngaba uziva udiniwe rhoqo? Ukukhathala kunye nokudinwa okungapheliyo kunokwenzeka xa umzimba uchaphazeleka ngenxa yokugula okanye isifo, kodwa oko kunokubangelwa ziimeko ngokubanzi ezinje ngoxinzelelo noxinzelelo.
Ezinye iimpawu zinokubandakanya ubuntununtunu bokukhanya, izandla kunye neenyawo ezibandayo, ukuphefumla ngokukhawuleza kunye nokubamba. Iimpawu ezizodwa ngakumbi zinokwenzeka ngeendlela ezikhethekileyo zomhlaza wobuchopho.
Yintoni onokuyenza ukuba unomhlaza wobuchopho?
-Umhlaza wobuchopho unokuba yimeko esongela ubomi- kwaye unakho, njengoko kusaziwa, ukwenzeka kokubini okulimazayo kunye nokubi. Ukuba ukrokrela ukuba unesi sifo, nceda unxibelelane negumbi lexakeka okanye ugqirha wakho ngokukhawuleza ukuze uqhubeke nonyango.
INQAKU LESIBINI: Unyango olutsha lwe-Alzheimer lunokubuyisela inkumbulo epheleleyo!
Zive ukhululekile ukwabelana ngeli nqaku noogxa bakho, izihlobo kunye nabantu obaziyo. Ukuba ufuna ulwazi oluthe kratya okanye izinto ezinje, siyakubuza ezifana kwaye uqhagamshelane ngeFacebook iphepha apha. Ukuba unemibuzo, ilungile Ukunxibelelana nathi (ngokuphelele mahala).
Fumana unyango ngoku-ungalindi: Fumana uncedo kwiklinikhi ukuze ufumane unobangela. Kukule ndlela kuphela onokuthi uthathe amanyathelo afanelekileyo okususa ingxaki. Ugqirha unokunceda kunyango, iingcebiso malunga nokutya, ukuzilolonga okwenziweyo kunye nokuzolula, kunye neengcebiso ze-ergonomic ukubonelela ngokuphuculwa kokusebenza kunye nokukhululeka kwempawu. Khumbula ukuba unako ubuze thina (ngokungaziwa ukuba unqwenela) kunye neeklinikhi zethu mahala ukuba ziyafuneka.
Ngaba uyazi ukuba: -Inyango ebandayo inokunika isiqabu seentlungu kumalungu aqaqanjelwa nezihlunu? Phakathi kwezinye izinto, I-Biofreeze (ungay-odola apha), equlathe ikakhulu iimveliso zendalo, yimveliso ethandwayo. Nxibelelana nathi namhlanje kwiphepha lethu le-Facebook, emva koko singaphendula nayiphi na imibuzo onokuba unayo.
Funda: - 8 Ukuzilolonga kwamaDolo aBi
Funda: - Ngaba yi-tendonitis okanye i-tendon UKWENZAKALA?
Funda: -Imithambo emi-5 elungileyo yokulwa iSciatica
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/hjernekreft.jpg?media=1648573622 400 700 ubuhlungu https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ubuhlungu2016-08-21 10:10:052022-03-18 17:27:52Iimpawu ezi-6 kunye neeMpawu zoMhlaza weBongo
Iimpawu ezi-6 kunye neempawu zeMeningitis
20 / 08 / 2016 /0 Amazwana/i Amanqaku mfanelo/av ubuhlungu
Nazi iimpawu ezi-6 kunye neempawu zokuxineka kwemizwa ekuvumela ukuba uqaphele imeko kwasekuqaleni kwaye ufumane unyango olufanelekileyo. Ukuxilongwa kwangoko kubaluleke kakhulu ukuthintela ukukhula komngcipheko wesifo somdumba. Akukho nanye kwezi mpawu ngokwendlela yazo yokuba une-meningitis, kodwa ukuba ufumana ezinye zeempawu, sicebisa ukuba unxibelelane negumbi likaxakeka okanye ugqirha wakho ukuze ufumane udliwanondlebe. Unalo igalelo? Zive ukhululekile ukusebenzisa icandelo lokuphawula okanye unxibelelane nathi ku Facebook okanye YouTube.
I-Meningitis, ekwabizwa ngokuba yi-meningitis, sisifo / usulelo olwenzeka kwizibeleko ezijikeleze ubuchopho kunye nentambo yomgogodla. Le meko inokusasazeka kwaye ibe mandundu ngakumbi ngokusilela kunyanga. Siphawula ukuba i-meningitis ebangelwa yintsholongwane ayinabungozi kangako kunezo zibangelwa yintsholongwane.
Olunye lweempawu zakudala ezaziwa kakhulu ze-meningitis kukukhawuleza okubomvu okunganyamalali okwexeshana ngoxinzelelo (umz. Ngokucinezela iglasi ngokuchasene nerhashalala) - olu vavanyo lusetyenziselwa ukubona ukuba irhashalala ibangelwa yityhefu yegazi, eyenzeka ngenxa usulelo. Irhashalala lihlala liqala njengamachaphaza amancinci abomvu ngaphambi kokuba ngokuthe ngcembe likhule libe ngamachaphaza amakhulu kwaye lisasazeke emzimbeni wonke. Kunganzima ukubona kwinqanaba lokuqala -kwakhona khumbula ukujonga indawo ekhaphukhaphu enje ngaphakathi entendeni nasentendeni yeenyawo. Oku kungxamiseka akwenzeki kuzo zonke iimeko, kodwa kuninzi.
Ngenxa yosulelo, abantu baya kuva ukuba umzimba ungena "kwimeko yomkhuhlane" ukuzama ukulwa nokudumba. Umkhuhlane kwi-meningitis uya kuba ngaphezulu kwama-37.5 degrees.
Abantu abachatshazelwe yi-meningitis banokufumanisa ukuba intamo ilukhuni kwaye phambili ukugoba (okongeza uxinzelelo kumqolo wesinqe) kunzima ukwenza.
4. Intloko kunye ne-malaise
Ngenxa yosulelo oluqhubekayo emzimbeni, umntu uya kuhlala enentloko kwaye angaziva enesicaphucaphu kwaye engonwabanga- kuyakubakho ukugabha njengoko imeko isiba mandundu.
5. Ukucaphuka nokudideka
Abantu abachaphazelekayo banokuba nomsindo kwaye amava anciphise amandla, kunye nokudideka / ukuguqulwa kwengqondo yokusebenza.
6. Imisipha kunye nentlungu edibeneyo
Ubuhlungu kumalungu kunye nezihlunu zihlala zenzeka kwi-meningitis. Ingakumbi intamo inokuvezwa.
Ezinye iimpawu zinokubandakanya ubuntununtunu bokukhanya, izandla kunye neenyawo ezibandayo, ukuphefumla ngokukhawuleza kunye nokubamba.
Yintoni onokuyenza ukuba unesifo sokudumba kwenwebu yengqondo?
- I-Meningitis ingaba yimeko esongela ubomi. Ukuba ukrokrela ukuba unesi sifo, nceda unxibelelane negumbi likaxakeka okanye ugqirha wakho ngokukhawuleza ukuze uqhubeke nonyango.
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/hjernehinnebetennelse.jpg?media=1648573622 469 750 ubuhlungu https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ubuhlungu2016-08-20 13:12:242022-03-18 17:27:49Iimpawu ezi-6 kunye neempawu zeMeningitis
Iphepha loku-1 lama-80123>»